I-Pakistan Airlines imisa iinqwelomoya zaseKabul emva kokuyalelwa kweTaliban ngamaxabiso okwehla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » I-Pakistan Airlines imisa iinqwelomoya zaseKabul emva kokuyalelwa kweTaliban ngamaxabiso okwehla
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zasePakistan • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Pakistan Airlines imisa iinqwelomoya zaseKabul emva kokuyalelwa kweTaliban ngamaxabiso okwehla.
Uninzi lweenqwelomoya zeenqwelomoya emhlabeni ezingasabhabheli zisiya eAfghanistan, amatikiti eenqwelo moya esiya kwikomkhulu lasePakistan, iIslamabad, sele zithengise kangange- $ 2,500 kwi-PIA, ngokweearhente zokuhamba eKabul, xa kuthelekiswa ne- $ 120- $ 150 ngaphambili.
Urhulumente waseTaliban uyalele iPakistan International Airlines (PIA) ukuba yehlise amaxabiso etikiti lomoya.
I-Pakistan International Airlines (i-PIA) kuphela kwesiphathamandla esiphuma kumazwe aphesheya rhoqo kwidolophu elikomkhulu laseAfghanistan.
Indlela izakuhlala imisiwe kude kube "imeko ilungele," ngokwe-Pakistan International Airlines (PIA).
Ngokwe-Pakistan International Airlines (PIA), urhulumente waseTaliban wase-Afghanistan wayalela inqwelomoya, ekuphela komntu ohamba ngenqwelomoya ohamba rhoqo ngaphakathi nangaphandle kwesikhululo senqwelomoya saseKabul, ukunciphisa amaxabiso eenqwelo moya ukuya kumanqanaba angaphambi kokuwa kukaRhulumente wase-Afghanistan oxhaswe ngo-Agasti .
Ukuphendula, Iinqwelo moya zase Pakistan unqumamise zonke iinqwelo-moya eziya kwikomkhulu lase-Afghanistan, ebiza uphazamiseko ngabasemagunyeni baseTaliban "ngabanamandla".
"Iinqwelomoya zethu zihlala zijongana nokulibaziseka okungafunekiyo ngenxa yokungaziphathi kakuhle kwabasemagunyeni kwezokubhabha eKabul," utshilo u-Abdullah Hafeez Khan, isithethi se-PIA.
Ngokutsho kwe-PIA, amagosa aseTaliban ahlala "ehlazisa" kwaye ngelinye ixesha "babephatha kakubi" abasebenzi.
Indlela yaseKabul izakuhlala imisiwe de kube "imeko ifanelekile," longeze njalo igosa lenqwelomoya.
Kwangoko, iTaliban yazisa Iinqwelo moya zase Pakistan kunye nomphathi weAfghani uKam Air ukuba imisebenzi yabo eAfghanistan iyakumiswa ngaphandle kokuba bavumile ukunciphisa amaxabiso athe aphuma ekufikeleleni kuninzi lwabantu baseAfghan ukusukela ngokuthathwa kweTaliban.
Umphathiswa wezothutho wase-Afghanistan uthe kwingxelo yokuba amaxabiso endlela kufuneka "ahlengahlengiswe ukuze ahambelane neemeko zetikiti ngaphambi kokuphumelela kwe-Islamic Emirate" okanye iinqwelomoya ziya kumiswa.
Iindiza phakathi kweAfghanistan nePakistan zithintelwe kakhulu ukusukela oko isikhululo seenqwelomoya saseKabul savulwa kwinyanga ephelileyo ngenxa yokufuduswa kwabantu abangaphezu kwe-100,000 baseNtshona kunye nabantu base-Afghanistan abasesichengeni emva kokuba amaTaliban ethathe i-Afghanistan.
Ngobunzima bezoqoqosho obandayo obongeza amaxhala ngekamva lase-Afghanistan phantsi kweTaliban, kuye kwakho imfuno enzima yokuhamba ngenqwelomoya, okwenziwa mandundu ziingxaki eziphindaphindwayo kwimida yokuwela iPakistan.